चार्टर्ड उडानको तालिका र भाडादर सार्वजनिक – NepaliEkta
प्रेमि प्रेमिकाले नहरमा हामफाले
मन्त्री र नेताको विलासिताका लागि जनताले किन कर तिर्ने ?
अनुशासनहीन प्रवृतिलाई निश्तेज पारौं
June 15, 2020 Nepaliekta	0 Comments
97 जनाले पढ्नु भयो ।
काठमाडौं । विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन हिमालय एयरलाइन्सले उद्धार चार्टर्ड उडानको तालिका र भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । नेपालबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्ने हिमालय एयरलाइन्सले जुन १६ देखि २० सम्म विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन गरिने चार्टर्ड उडानको तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारको निर्णयअनुसार कोभिड–१९ महामारीबाट विभिन्न मुलुकमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने अनुमतिअनुरुप उडान तालिका बनाइएको हिमालयले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई २४ र हिमालय एयरलाइन्सलाई १९ उडान गर्नेगरी अनुमति दिएको थियो ।
← कुश्मा घटनाप्रति मसालद्वारा दुःख प्रकट
विकासको बहानामा अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई आफ्नो सैन्य अखडा बनाउँदै छ : केसी →
May 5, 2020 May 21, 2020 Nepaliekta 0
June 8, 2020 Nepaliekta 0
February 24, 2020 March 9, 2020 Nepaliekta 0
7182 जनाले पढ्नु भयो । काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले पार्टी छोडेर गएका योगेन्द्र ढकाल, अर्थात् अजय शर्माको
July 4, 2020 Nepaliekta 0
325 जनाले पढ्नु भयो । नरमती सिंजाली अनुशासन भनेको मानव जातिको सर्वोत्तम गुण हो । अनुशासित व्यक्तिलाई सबैले मन पराउँछन्
39159 जनाले पढ्नु भयो । प्रकाश सिलवाल,काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १० र ११ को माध्यमिक शिक्षा
1900 जनाले पढ्नु भयो । खिमराज चालिसे (चंडिगढ) जातिगत रंगका आधार ढालौं वर्ग विहिन समाज निर्माण गरौं । रुढÞिवादी कु–संस्कार
338 जनाले पढ्नु भयो । बेंगलोरका का. सर्वहारा उपनामले चिनिने बहादुर सिंह र हैदरावादका खगेश्वर आचार्यको निधनले सिंगो मूल प्रवाह